Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 28)
Waxaan Daawadaa: Wristwatch… oo wata Android
Waxaan ahay Watch: Wristwatch ... la Android.
Android waa midka ugu xiran nidaamyada furan, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay VisionMobile
Android waa midka ugu xiran nidaamyada furan, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay VisionMobile.
Waxay horumariyaan softiweer si ay ugu shaqeeyaan barnaamijyada Android ee 'MeeGo'
Waxay horumariyaan softiweer si ay ugu shaqeeyaan barnaamijyada Android ee 'MeeGo'.
BlueStacks: wararka ku saabsan mashruuca lagu socodsiinayo barnaamijyada Android ee Windows
BlueStacks: wararka ku saabsan mashruuca lagu socodsiinayo barnaamijyada Android ee Windows.
Google ayaa xannibaya kirada filimka ee "rooters"
Google wuxuu xannibayaa kirada filimada ee qalabka xididaysan
New Vodafone 858 Smart Terminal, Android "Calaamadda Cad".
Vodafone ayaa soo bandhigtay qalab aan qaali ahayn, "sumad cad" oo ah Android.
ESET Amniga Amniga: antimalware-ka caanka ah ee qalabka mobilada wuxuu yimaadaa Android
ESET Amniga Amniga: antimalware-ka caanka ah ee qalabka mobilada wuxuu yimaadaa Android.
Qalabka Furan ee Android: Qalabka horumarinta Terminal-ka Android ee Arduino
Qalabka Furan ee Android: Qalabka horumarinta ee dhammaadka Android ee ku yaal Arduino.
CyanogenMod 7 nambarkii ugu dambeeyay waa la heli karaa
Daahfurka nooca xasilloon ee CyanogenMod7 ee boosteejooyinka Android
C # iyo .NET luqadaha ayaa imanaya Android. Mashruuca Mono.
Mono waa barnaamij u oggolaanaya horumarinta barnaamijyada moobiilka ee Android illaa Microsoft .Net
Cilmi baarista ABI waxay saadaalisay in marka la gaaro 2016 nidaamka Google ee nidaamka mobilada ee Google uu joogi doono 45% taleefannada casriga ah ee adduunka oo dhan.
Google waxay u sameysay adeeg biil ah dalab, oo loogu magac daray In-app Billing, oo loogu talagalay soosaarayaasha barnaamijyadooda ku bixiya Suuqa Android.
Furashada barnaamijka Android ee la jabsaday ee kugu khiyaaneynaya SMS badan !!
Soco & Qoraal loogu talagalay Android ee leh Furin. Waxay kaa dhigi kartaa mid dhab ah "jaban" qaansheegta soo socota ee hawlwadeenkaaga iyadoo lagu saleynayo dirista ballaaran ee SMS.!
HeLauncher, waa hab cusub oo aad shaqsi ahaan ugu wareejiso moobilkaaga Android
HeLauncher waa codsi leh 10 isdhexgal oo kala duwan si aad u habeyn karto shaashadda guriga ee qalabkaaga moobiilka ee Android.
Ku rakib rasmiga rasmiga ah ee 'ROM Froyo 2.2.1' oo ay OTA ugu rakibtay HTC Magic oo lahaa ROM kale oo aan rasmi ahayn.
Ku rakib HTC Magic rasmiga ah ROM Froyo 2.2.1 ee OTA, haddii aad horey u haysatid "karis" ROM waxay u baahan tahay in looga tago aaladda rasmiga ah ROM Donut 1.6
Supertool: soo uruuri / kala-sooc / soo dejiso Ilaha ROM-kaaga.
Qalab lagu soo ururiyo laguna kala furfuro ilaha roms-ka android
Tutorial si loo rakibo loona dhigo ADB Android Linux
Android 2.4: Cusbooneysiinta Gingerbread ama Ice Cream?
Android 2.4 ayaa lagu xantaa inuu soo bixi doono bisha Abriil, markii horey loo sii shaaciyey inuu baxayo xagaaga isla markaana uu jiri doono cusbooneysiinta Gingerbread.
Tapatalk Forum App, si aad ugu gudubto shirarka si fudud oo dhaqso leh.
TAPATALK waa aalad lama huraan ah oo aad ugu dhex wareegeysid golahaaga Android-kaaga. La jaan qaadi kara vBulletin, IPBoard, phpBB ama nidaamyada madasha SMF
Swype waxay mar labaad aqbashay codsiyada inay noqdaan tijaabo beta. Dhaqso!
Swype, kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka casriga ah, ayaa mar kale furay waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada tijaabada Beta.
Iyada oo leh 'CamScanner' Android-kaaga ayaa ah iskaanka jeebka.
Hadda taleefankaaga Android iyo barnaamijka CamScanner waxaad jeebkaaga ku dhex haysan kartaa dokumenti dokumenti awood leh.
Saamaynta laga helay romans-ka Cyanogen
Sida loo dheereeyo nolosha baytariyada
In Ask ars waxay qoreen maqaal weyn oo ku saabsan sida loo dheereeyo nolosha baytariyadayada lithium ion.
Dib u eegista Android MIUI ROM
Barnaamijyada Android ee ku shaqeeya BlackBerrys
RIM waxay horey u sheegtay in Playbook-kooda ay ku shaqeyn karaan barnaamijyada Android, laakiin hadda waxaa jira cadeymo muujinaya inay ka wadaan telefishinada kale ee BlackBerry.
Taxanaha nooca Android 2: Waxaan tijaabinay RC1!
Ma jeceshahay taxanaha telefishanka, anime, filimada? Ma seegi kartid barnaamijka "Taxanaha loogu talagalay Android". Sii deynta soo socota ee nooca 2.0
Xisaabiyeyaasha loogu talagalay Android
Dib u eegista iyo isbarbar dhigga codsiyada xisaabiyaha kala duwan ee loogu talagalay android
Akhristayaasha E-buug ee loogu talagalay Android
Isbarbardhiga akhristayaasha e-buugga ee loogu talagalay Android
10 sababood oo loo doorto Android:
Muxuu iibsadaha taleefanka gacanta cusubi weydiin karaa: Waa maxay Nidaamka Hawlgalka ee aan ku doonayo mobaylkayga? 10 Sababood oo lagu doorto mobilada gacanta ee Android
Waxay maareeyaan inay ku xirmaan Microsoft Kinect iyo qalab Android ah
Waxay maareeyaan inay ku xirmaan Microsoft Kinect iyo qalab Android ah.
Digniin, Virus cusub (Trojan) oo ku socda Android!
Fayras cusub oo Trojan ah ayaa laga helay Android, loona yaqaan HongTouTou. Waxaa soo wariyey shirkada amaanka ee LookOut oo suuq geyn antivirus u sameysa nidaamka mobilada. Samee raadinta iyo guji natiijooyinka, waad isdaba marin kartaa SMS-ka.
HoneyComb waxaa ku jiri doona barnaamij tafatirka fiidiyaha ah oo loogu magac daray Filim Studio
Dib u eegis ku saabsan dhammaan wararka la yimaada Honeycomb
Go Cimilo, macluumaadka saadaasha hawada, aalado iyo animations cajiib ah
Cimilada Go waa codsi cimilo leh oo ku jira aalado iyo animations cajiib ah.
Waxaa laga heli karaa Suuqa Android saacadda dijitaalka ah ee MIUI ROM
Waxaan horeyba uga heli karnaa Suuqa Android saacadda ku jirta romanka caanka ah ee MIUI
Waxaan horey u haysannay Android-ka Nokia, Gingerbread oo ku shaqeynaya Nokia N900
Android waxay ku timid Nokia si aan rasmi ahayn, waxaan arki karnaa nooca ugu dambeeya ee nidaamka aaladaha robotka cagaaran oo si weyn ugu shaqeynaya Nokia N900
Isbarbardhig: Google Nexus S vs iPhone 4
Nexus S iyo iPhone 4 waji ka waji, laba terminaal oo waaweyn oo leh faa'iidadooda iyo khasaarahooda, midkee ayaad doorbideysaa?
Ku rakib Gingerbread Live Wallpaper dusha Nexus One
Ku rakib sawirada cusub ee Gingerbread animated ee ku yaal Nexus One, kaliya haddii aad rujin tahay
Adoo adeegsanaya Android- Sida loo tirtiro barnaamijyada ku jira telefishinada Android
Cashar ku saabsan sida loo tirtiro barnaamijyada Android ee boosteejada, saddex habab oo muhiim ah.
Isticmaal cusub oo laga helay biraawsarka Android wuxuu kuu ogolaanayaa helitaanka macluumaadka ku kaydsan micro SD
Iyada oo z4root ah ayaan ka heli karnaa xididka hal guji ku dhowaad terminal kasta oo Android ah
Hadda way ka sahlan tahay sidii hore in lagu rakibo Android 2.2 ama sidoo kale loo yaqaan Froyo oo ku yaal iPhone 2G ama iPhone 3g.
U diyaari Nexus One inuu noqdo kan ugu horreeya ee helaya cusbooneysiinta Sanjabiilka
Lookout Premium, antivirus cusub oo loogu talagalay Android
shirkadda amniga mobilada Lookout in Khamiista soo socota, Nofeembar 11, ay bilaabi doonto nooc Premium ah oo ah barnaamijkeeda antivirus ee loogu talagalay Android, Lookout Premium
U diyaari Nexus Ones-kaaga cusbooneysiinta Gingerbread-ka
Laga soo bilaabo OHA wuxuu ka yimaadaa bayaan aad u wanaagsan oo ka yimid mid ka mid ah xubnaheeda, u diyaari Nexuskaaga cusbooneysiinta Gingerbread
Nooca cusub ee Youtube ee loogu talagalay Android sidoo kale waxaa loo heli karaa Android 2.1 oo xidid ah
Hadda waxaa suurtagal ah in lagu rakibo nooca cusub ee YouTube-ka loogu talagalay Android-ka boosteejooyinka ku shaqeeya Android 2.1
Midkoodna Android 2.5, ama 3.0, Gingerbread ma noqon doono Android 2.3
Nooca Android ee loo yaqaan 'Gingerbread' wuxuu noqon doonaa Android 2.3
Root Explorer, ka tirtir barnaamijyada horay loo rakibay ee ka yimid Android-kaaga
Root Explorer waad ka tirtiri kartaa codsiyada la socda nidaamka oo ay ku jiraan kuwa romka caadada u ah
Ilaa hadda waxaa jira warar badan oo ku saabsan Gingerbread, Samsung, boosteejooyinkooda, imaatinka kiniiniyada leh Android 3.0, taariikhaha, dhammaantood halkan lagu soo ururiyey
Qalab afar codsi ah ayaan xoogaa ugu soo dhowaan doonnaa awooddaas, iyadoo si weyn u kordhinaysa nolosha batteriga.
Universal Androot, ku hel xididka marinkaaga hal guji
Universal Androot waxaan ku heli karnaa xidid marinkeena kaliya hal guji
Isku xirka MIUI, wajiga cajiibka ah ee wiishkaaga Android
Qalab cusub ayaa ka soo iftiimaya Shiinaha, waxaa loo yaqaan MIUI waxaana loo heli karaa Nexus One iyo Htc Desire
Isticmaalka Android- Desktop-ka
Waxaan ku bilaabaynaa buugan isticmaalaha ah 'Android' desktop-ka, halkaas oo aan dhigeyno tuuryo, widget, xiriiro, iwm.
U wareejiso barnaamijyadaada Micro SD si fudud oo ku habboon - Kaliya Froyo
U dhaqaaji oo ku maaree codsiyadaada micro SD si fudud oo dhaqso leh codsiyada soo socda, ApptoSD, App2SD, MoveToSD.
Ku rakib Android 2.2 iPhone 2G / 3G hal guji oo keliya
Iyada oo loo yaqaan 'iPhodroid' waxaan ku rakibi karnaa Android 2.2 iPhone 2G ama 3G hal guji
Kaspersky wuxuu Trojan ka helaa Android wuxuuna xayeysiiyaa qaybta antivirus-keeda, isku soo beegmid?
Shirkadda sameysa antivirus, Kaspersky ayaa ku dhawaaqday inuu jiro Trojan oo ku saabsan barnaamijka Android iyo habka ay ugu dhawaaqeyso antivirus suite, iskuduwaha.
Hadda waa suurtogal in la helo marin xidid ku ah Xperia X10 iyo Xperia X10 Mini oo hal guji keliya la adeegsanayo
Barnaamijka 'III III' ee barnaamijka
Isku xirka arjiga waa mid ka mid ah qaybaha aasaasiga ah ee barnaamijka Android, aan aragno sida loo sameeyo.
Barnaamijyada Android II-Hello World
Qaabkan labaad ee loogu talagalay barnaamijyada Android waxaan ku sameyn doonnaa hal-ku-dhigga ah "Hello World" oo aan seegi karin
Ku hel marin xidid Htc Desire hal guji
Waxaa jira codsi loo yaqaan 'unrevoked' oo kuu oggolaanaya inaad marin u hesho Htc Desire hal guji.
Android waa barnaamij bilaash ah, sax miyaan nahay?
Android marwalba waxaa looga hadlaa sidii barnaamij bilaash ah, laakiin maxay tan macnaheedu runti tahay? Ma runbaa inay tahay software bilaash ah?
Barnaamijka I-Deegaanka ee Android
Buug ku saabsan sida loo rakibo Android SDK iyo Eclipse si loo bilaabo horumarinta barnaamijyada Android
Ku rakib Android 2.2 Htc Magic ama Htc G1 / Dream
Cyanogen Mod ayaa hada soosaartay nooceda Android 2.2 ee qalabka Htc Magic iyo Htc G1 / Dream
Cusbooneysiinta Android 2.1 ee loogu talagalay Liistada Acer ee hadda laga heli karo Spain
Cusboonaysiinta Android 2.1 ee loogu talagalay Acer Liquid ayaa hadda la heli karaa
Hadda ka dib, waad rujin kartaa Sony Ericsson Xperia X10 oo markaa waad rakibi kartaa roms-ka la kariyey
Cusboonaysiinta Android 2.1 ee loogu talagalay Orange's Htc Hero, khariidadda loogu talagalay Faransiiska
Laga soo bilaabo Faransiiska wuxuu ka yimaadaa khariidad leh taariikhda la filayo ee cusbooneysiinta Android 2.1 laakiin loogu talagalay Htc Hero terminals ee shirkadaha isgaarsiinta kala duwan
T-Mobile wuxuu xaqiijinayaa cusbooneysiinta Android 2.2 ee MyTouch 3g
T-Mobile wuxuu xaqiijiyay in Terminal-ka MyTouch 3G uu cusbooneysiin ku sameyn doono Android 2.2
Aynu ku baranno Android 2.2 ama Froyo si qoto dheer
Android 2.2 wuxuu noo keenayaa ciwaanno badan iyo howlo cusub oo aan si qoto dheer u eegeyno.
Sida loo rakibo Rom Cyanogen oo wata Android 2.1 Htc G1 iyo Htc Magic
Cyanogen ayaa horay u sii daayay romerka ay wadato Android 2.1 ee loogu talagalay Htc G1 iyo Htc Magic
Codsiga maareeya sawirada iyo fiidiyowyada ku jira Android 2.1 wuxuu leeyahay tayo muuqaal ka hooseeya kii ka horreeyay
Fiidiyow sharxaya sida loo baabi'iyo is-dhexgalka Htc Sense ee ku jira guntimaha Android
Sida loo helo marin xidid ee Htc Tattoo
Buug si aad ugu hesho marin xidid Htc Tattoo hal guji.
Buugga isticmaalaha Htc Legend ee diyaar u ah soo dejinta
Buugga isticmaalaha Htc Legend ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Terminal-ka Htc Touch HD ee lagu suuq geeyo Windows Mobile wuxuu hada rakibi karaa Android 2.0
DIB UGU SOO CELINTA AMON-RA 1.5 EE RIYADA HTC IYO SIXIRKA SIXIRKA
Amon-Ra wuxuu bilaabay noocyadiisa cusub ee soo kabashadiisa weyn ee labada Htc Dream iyo Htc Magic.
ANDROID 2.0, WARARKA IYO MUUQAALADDA
Markaan helno Android 2.0 SDK oo aan heli karno waxaan ogaan karnaa dhammaan astaamaha uu nidaamka hawlgalka moodada ahi noo keeni doono.
SIDEE AYAAN U XIRIIRI KARAA HTC HERO
Ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee liinta ah ee Htc Hero, qaybta xididka ayaa luntay. buugan waxaad ku ogaan doontaa sida loo xidido halyeeyga Htc ka dib marka la cusbooneysiiyo
SIDEE LOOGU SAMEEYAA SHARCIYADA SHAQADA ANDROID
Si aad u qaadatid shaashadda shaashaddayada 'Android', waxaa jira laba fursadood, mid ka mid ah codsi ka socda Suuqa Android iyo kan kale oo loo maro Android SDK.
AMARYADA AASAASIGA AH EE ADB OO KA YIMID ANDROID SDK
Markii aan sameyno isbeddelada romka, rakibno soo kabasho cusub, ama SPL, waxaan u baahanahay inaan ku sameyno qaanadda ADB ee Android SDK, aan baranno sida loo isticmaalo.
Halkan waxaad ku haysaa buug-gacmeedka ku saabsan sida loo rakibo cusbooneysiinta Android 1.6 ama Donut ee terminalka Htc G1
Waxaan u maleynayaa in ku dhowaad dhammaanteen ay maqleen taas oo ku saabsan qaabka soo kabashada, adigoo riixaya ALT + s, tirtirid, iwm. Waxaan dooneynaa inaan caddeynno waxyaabaha qaar oo aan ku rakibeyno kuwa kale.
Isku-dubaridka yar ee ereyada iyo fikradaha inta badan looga adeegsado adduunka Android, waxaan damacsan yahay inaan wax yar ku caddeeyo waxa shay kasta yahay oo aan isku dayo inaan wax yar iftiimiyo.
NEBUDROID KU XUKUUL KUNSALKAAGA ANDROID
Iyada oo Nebudroid waxaad awoodi doontaa inaad u rogto terminal-kaaga Android hal talis dheeri ah oo ah Nes console-ka. Waxaad u isticmaali kartaa xawaare-dhaqaaqa iyo shaashadda taabashada inaad ku ciyaarto
SPB TV TELEFISHINKA IYO ANDROID
Spb Tv waa codsi loogu talagalay Android kaas oo aan ku daawan karno TV-ga adigoo sii deynaya.
ANDROID IYO LINUX, FIKRADO
Maanta waxaan bilaabeynaa cashar yar oo ku saabsan Linux iyo Android. Tani looma jeedin inay ahaato mid dhammaystiran ama aad u ...
TOMTOM EE ANDROID SIDOO KALE OO DHAWAAN
Maamulayaasha Tomtom ayaa dhawaan sheegay inay ka shaqeynayaan horumarinta Navigator-ka nidaamka Android
ROM CYANOGENMOD LAGU LEEYAHAY DONUT ON HTC G1 AMA SIXIRA SIXIRKA
Romka la yiraahdo CyanogenMod, wuxuu na siinayaa fursad aan ku tijaabino qaar ka mid ah astaamaha casriyeynta soo socota ee Android, Donut.
Buug si aad u hesho marin xidid u Htc Hero.
Manul ku saabsan sida loo helo marin xidid ee Htc Magic iyo sida loo rakibo Haykuro SPL-ka cusub ee isbeddelka romka dambe
CODKA GOOGLE EE ANDROID WUXUU AHAY RASMI
Hadda waxaa suurtagal ah in laga soo dejiyo barnaamijka Google Voice ee loogu talagalay Android suuqa Android, inkasta oo ay ka shaqeyso oo keliya suuqa Mareykanka
DONUT, ECLAIR IYO FLAN DIB U EEGIDDA DIB UGU DANBEEYA EE ANDROID
Android waxay lahaan doontaa seddex cusbooneysiin oo la yiraahdo Donut, Eclair iyo Flan. Isdhexgalka Android ee shabakadaha bulshada sida Facebook iyo Twitter waa la horumarin doonaa
ISBEDEL SPL LOOGU BADALO HTC G1
Si loo rakibo roomayaasha qaarkood waa lagama maarmaan in la beddelo SPL si loo helo meel xusuus badan oo bilaash ah.
U DUUB QAABKA ANDROID EE Kaadhka SD
U gudbinta codsiyada androidka kaarka micro Sd-ka ah
IS DIYAARINTA SD SI UU UU DHIIBO APPS APPS
Buug ku saabsan sida loo qaabeeyo kaarka Sd-ka si loogu gudbiyo barnaamijyada Android isla markaana loo xoreeyo xusuusta Rom
SIDEE LOOGU HELI KARAA XIDHIIDHKA SIXIRKA HTC
TILMAAN KU SAABSAN HALKAAN https://www.androidsis.com/acceso-root-en-htc-magic-e-instalacion-del-spl/ Si aad u bilawdo, waxay kuu sheegaysaa in tani ay tahay uun turjumaad bilaash ah ee buuggan halkan lagu dhejiyay. Dhamaan the
SIDEE LOOGU SOO SAARAA MAWDUUC CUSUB OO LAGU SAMEEYO ANDROID
Sida loo beddelo mawduuca ku jira android
Sida loo helo rool-ka T-Mobile G1
buug ku saabsan sida loo suurtogeliyo helitaanka xididka G1 oo leh android
KU BEDDELIDDA ROM-KA RIYADDA HTC AMA G1
U beddelashada ROM-ka Htc Dream ama G1 marka aan helno xidid helitaan (ama maamule Windows ah ...